I-Best Forex Trading Platform kanye neSistimu | Software Forex - FXCC
Ungalindela ukuthi omunye wabathengi be-ECN-STP oholayo ukukuhlinzeka ngezindlela zakamuva, zokusika, amapulatifomu okuzohweba ngazo
futhi ku-FXCC asilokothi sidumale. Amakhasimende ethu angakwazi ukufinyelela ezimakethe ze-FX kuwo wonke amadivayisi akhethwayo; ama-mobiles, amaphilisi, i-laptops,
Ama-PC futhi ngokusebenzisa amaseva akude. Umlingani wethu othandekayo wokufinyelela ezimakethe yi-MetaQuotes Software Corporation, i
abadali nabathuthukisi bomhlaba owaziwayo, ukuwina umklomelo kanye nesiphathimandla esithandwa kakhulu se-FX sokuhweba kukhona, MetaTrader 4.
I-MetaTrader i-4 yichungechunge lamapulatifomu aklanyelwe ngu I-MetaQuotes Software Corporation. I-MetaQuotes Software Corp. inkampani yentuthuko ye-software eyaqala ukuhweba ku-2000. Kusukela ekuqaleni kwayo, inkampani isungule idumela elingenakulinganiswa futhi lajabulela impumelelo evelele ekuthuthukiseni nasekuhambiseni ukuhamba kwamapulatifomu okuhweba ezintsha, enembile okuhweba, izinsizakalo kanye nezixazululo ezingxenyeni zokuhweba emakethe.
Amazinga abathengisi abayinkimbinkimbi nabangokwazi ukuzikhandla bangathuthuka ukuze bahambisane nezindlela zabo zokuhweba nokuzifunela, ngokusebenzisa ububanzi obugcwele bezimpawu nezinzuzo ezitholakala kumapulatifomu e-MetaTrader, ahlala engavunyelwe embonini. Kodwa-ke, kubathengisi abasha nabangenalwazi, amapulatifomu ayamangalisa: umsebenzisi onobungane, olula futhi oqondile ukusebenzisa.
Kungakhathaliseki ukuthi ungumthengisi wesikhathi esithile ofuna ukukhulisa amandla akho nethuba lokuphumelela, noma uzicabange njengokuba uchwepheshe ogcwele isikhathi eside, ofuna ukusebenzisa: iseva yangasese yangasese noma ukusebenzisa amasu okuhweba algorithmic ukufinyelela ezimakethe ngesivinini somlilo, iMetaTrader unesisombululo esifanele kuwe. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa i-FXCC ubuye uqalene ngqo nokucubungula ngaphandle kokungena kwamasevisi angenele, ngenkathi ufinyelela echibini labahlinzeka ngempahla nge-ECN inethiwekhi esiyinikezayo. Ukuqinisekisa ukuthi izingcaphuno ze-interbank kanye nokusabalalisa ozitholayo yizibonakaliso zemakethe yangempela yezimo zamanje.
I-FXCC inikeza amapulatifomu alandelayo: I-MetaTrader 4, i-MetaTrader i-4 Mobile, i-MetaTrader i-4 eminingi yokugcina futhi I-MAM (umphathi we-akhawunti amaningi).
Zama amapulatifomu ethu!
Ngabathengisi be-MetaTrader 4 bafinyelela enye ethandwa kakhulu amapulatifomu okuhweba ngaphambili emhlabeni. Ethembekile, eqinile futhi esebenzayo, ipulatifomu iqukethe wonke amathuluzi okuhweba adingekayo kanye nezinsiza ukuze kuvunyelwe abadayisi ukuba: benze ucwaningo nokuhlaziywa, faka futhi uphume ukuhweba futhi usebenzise isofthiwe yokuhweba okuzenzakalelayo, ama-Advisors Advisors (EAs). Uma ubheka ukuhamba phambili kwesixuku nama-EA atholakalayo, uMetaTrader uphinde wafeza ulimi lwakhe lohlelo - I-MQL4, okuvumela abadayisi ukuthi bahlele ama robot abo abasebenza ngokuzenzakalelayo.
Download Manje Funda kabanzi Umhlahlandlela womsebenzisi
Ihambisa ububanzi obubanzi bamadivayisi we-Forex yokuhweba.
I-MetaTrader 4 Mobile App iyi-platform ephelele ehleliwe futhi ephelele yokuhweba yamadivaysi eselula e-Android ne-iPhone. Lolu hlelo lokusebenza oluyingqayizivele luvumela abahwebi ukuba bakhethe kusuka ezinkampanini zamakhamphani ezinkampani ezidayisa ukuncintisana nebhizinisi labathengisi. Lolu hlelo luhlinzeka konke abathengisi badinga ukunika amandla ukuhweba kwe-Forex yokuphumelela. Ishumeke ku-platform yilezi: iqoqo le-oda eliphelele, umlando wokuhweba, amashadi asebenzisanayo, ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe nokukhethwa okubanzi kunamadivayisi eselula asekelwayo.
Abathengi abasebenzisa i-MetaTrader 4 Mobile App bajabulela ukusebenza okunamandla kokuhweba i-Forex nganoma isiphi isikhathi nanoma kuphi emhlabeni. Umtapo wonke we-analytics nokukhethwa kokuhweba kuyatholakala kumadivayisi eselula.
Ukuhweba kwe-Mobile nge-MetaTrader izici ze-4
Qedela ukulawula i-akhawunti yokuhweba
Ukuhweba kusuka noma yikuphi i-24 / 5
Zonke izinhlobo ze-oda nezindlela zokwenza
Amashadi wezinhlamvu ezisebenzayo
Izinhlobo ze-3 zamashadi: imigoqo, izibani zaseJapan kanye nomugqa ophukile
Izikhathi ze-9: kusukela ngomzuzu owodwa kuya kwenyanga eyodwa
I-30 yezinkomba zobuchwepheshe ezidume kakhulu
Izindaba zezimakethe zezezimali
Ingxoxo yeselula yamahhala ne-imeyili
Qalisa-Google Play ku IyatholakalaApp Store Funda kabanzi Umhlahlandlela Womsebenzisi we-Android IOS User Guide
Iqaliswe ku-2006, i-MetaTrader 4 MultiTerminal manje iyinxenye ehlonishwayo nehlonishwayo ye-MetaTrader 4 Online Trading Platform. I-MultiTerminal ihloselwe ukuphathwa ngesikhathi esisodwa kwama-akhawunti amaningi. Lesi yisikhungo esibaluleke kakhulu nesikhulumi kulabo abaphatha izimali, noma labo abaphatha ama-akhawunti ka-investors kanye nabathengisi abasebenza nama-akhawunti amaningi ngesikhathi esisodwa.
I-MT4 MultiTerminal ihlanganisa ngokuphumelelayo imisebenzi eholela emakethe ehlanganisa ukuhweba okuphumelelayo kwama-akhawunti amaningi kanye nokusetshenziswa okuhlukile. I-interface yomsebenzi ifana neyomzila we-MetaTrader 4 Client Terminal. Kuyindlela elula kakhulu futhi enembile, ukuthi noma yimuphi umhwebi ojwayele ukusebenzisa i-MetaTrader 4 Client Terminal, angakwazi ukujwayela kalula.
I-MetaFX inikeza uhlelo lokusebenza lwe-software lomdayisi wezohwebo olubizwa ngokuthi I-MAM (I-Multi Account Manager) zezimali ze-akhawunti ezilawulwayo zokudayisa abahwebi. I-MAM ivumela ukusebenza nanoma yiliphi inani lama-akhawunti aphethwe, usebenzisa izindlela zokwabiwa eziyinkimbinkimbi, ukusebenza ne-Expert Advisors nokunye okuningi. Ezinye zezici nezinzuzo zifaka:
I-plugin ye-Server Side idala ukusebenza okusheshayo
Ukuvalwa okuncane kwe-oda yi-Master Account execution
Ivumela izibonakaliso zokuhweba ukuba zithengiswe kwi-platform ye-MT (i-module ehlukene)